ⓘ लोदी, ओहायो
रेडफिल्ड नामका एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जसको नाममा रेडफिल्ड स्ट्रिट नामाकरण गरिएको छले नया मार्गको चिनो लगाए रुखहरूको प्रयोग गरेर। पछि यसलाई कर्भि नामाकरण गरियो, र यस क्षेत्रको पहिलो सरकारीमार्ग यसलाई साधारण छोट्करी पछि निर्माण गरियो। हालका वर्षहरूमा यो यु.एस ४२.
लोदी प इन्टरस्टेट ७६को लागि पश्चिमी अन्तिम विन्दु हो, जुन इन्टरस्टेट ७१संगको संगममा गएर अन्त हुन्छ।
लोदीले प्रत्येक वर्ष मध्जुय जुलाईमा स्विट कर्नदुधे मकैको कार्यक्रम आयोजना गर्दछ। तीन दिवसीय यस कार्यक्रम टाउन स्क्वायरमा परेड गरेर सुरुहुन्छ। अन्य आकर्षणहरूमा खाद्यमेला,चडाइहरू,र ख्यातिप्राप्त टग-अफ-वार पर्दछन्।
लोदीको अवस्थिती ४१°१′५९″उ॰ ८२°०′४२″प॰ ४१.०३३०५९, -८२.०११७७४, इस्ट फोर्क र ब्ल्याक रिभरको आसपासमा रहेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनगणना विभाग अनुसार, यहाँको कुल क्षेत्रफल २.१ वर्ग माइलहरू ५.४ वर्ग किमी२.१ वर्ग माइल ५.४ किमी २, छ जस मध्ये, ९९.५३%२.१ वर्ग माइल ५.४ किमी २ जमिन हो र ०.४७% पानी.
3. जनसङ्ख्या तथ्याङ्क
जनगणनाको २०००, अनुसार त्यहाँ २,१६१ मानिसहरू रहेका छन्, ८२८ गृहस्थहरू, र ६३० परिवारहरू यस गाउँमा रहेका छन्। जन घनत्व ११५४.२ प्रति वर्ग माइल ४३६.१/किमि² रहेको थियो। प्रति वर्ग माइल ४०८.८को औसत घनत्व १५४.४/वर्ग किमि र ६८ आवासीय इकाइहरू रहेका थियो।
त्यहाँ ३९९ गूहस्थहरू थिए जस मध्ये ३३.५% हरूको १८ वर्ष मूनिका सन्तान थिए जो तिनीहरूसँग बसिरहेका थिए, ५८.१% साथ वसिरहेकाबैबाहिक दाम्पतिहरू,११.५% हरूमा श्रिमान बिनाको गृहस्थ महिला, र २३.८% परिवार रहित थिए। कुल मध्ये १७.५% गृहस्थ एकल हरूको थियो भने ७.८% मा ६५ वर्ष या माथिका एक्लै बसिरहेका बृद्धबृद्धा रहेका छन्। औसत गृहस्थ आकार २.६१ र औसत परिवार आकार ३.०० रहेको थियो।
गाउँको जनसङ्ख्या २६.२% १८, वर्ष मुनिका १०.४% १८ देखि २४ सम्मका, ३१.९% २५ देखि ४४, २१.१% ४५ देखि ६४, र १०.४% ६५ वर्ष माथिका रहेका थिए। औसत उमेर ३६ साल थियो। हर १०० महिलाहरूको लागि ८८.८ पुरुषहरू थिए। हर १८ वर्ष माथिका १०० महिलाहरूको लागि ९७.७ पुरुषहरू थिए।
गाउँमा एक घरको लागि औसत आय ३९,८२१ डलर थि यो,र एक परिवारको लागि औसत आय ४४,२८६ डलर थियो। पुरुषहरूको औसत आम्दानी $३५,०६५ र महिलाहरूको $२१,०२३ रहेको थियो। गाउँको प्रतिव्यक्ति आय $१६,४६२ थियो। करिब ३.५% परिवार ५.५% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेका थिए, ५.३% १८ वर्ष मुनिका र ७.०% ६५ वर्ष र माथिका।
Wikipedia: लोदी, ओहायो